Namuhla ezweni lethu owande kakhulu osebenza khona-ke abesilisa labesifazana isibe mshado wasehhovisi, okungukuthi uhlobo abahlala ndawonye, kungase kube ukulima, ukuzala, njll, ukuthi akusho ukubhaliswa ngokomthetho ebuhlotsheni babantu imibhangqwana. Mayelana izizathu zokuthi kungani mshado wasehhovisi kwaduma, singakhuluma isikhathi eside - kungcono ukulahlekelwa umshado wendabuko, okuyinto eqondiswa nguhulumende njengoba esinye zezici eziyinhloko zomthetho yokuba khona komuntu, ukubaluleka yayo yangaphambili ezingqondweni izakhamuzi, futhi izindleko kahle eliphezulu inqubo ngokwalo, futhi ngokuvamile kakhulu ukwenqena zabantu yeleyo yisiphi isibopho. Ngempela, izizathu ezenza abantu bakhetha umngane womshado ngokubheka civil eziningi, kodwa zama ukuqonda ukuthi yini eyenza umuntu civil elithola umshado nezingozi ilungu komuntu umshado onjalo ngamunye. Ngo mshado wasehhovisi labo abanamathela eziningi, kodwa akukho esingaphansi the ningi ardent bangi, ngakho ukuqonda yiziphi emihle nemibi ilungu ngalinye ithola umndeni eyinqaba kubaluleke kakhulu ukuba singenzi amaphutha.
Izinzuzo mshado wasehhovisi ngokuvamile zihlanganisa ithuba lokufunda nomunye kangcono, ngakho ukuba ithi "ukujwayela" abangenako kuwo. Kuyaphawuleka ukuthi kwakungenzeka lokhu akusho ukusiza abaningi ukuba baziqonde bona ngokwabo kanye ukuqonda ukuthi ukhululekile beyohlalisana naye ekhethiwe, kodwa kulokhu, kungase kuphakame isimo uma inkinga kancane ukuthi ngempela kuphakama ziyaxazululwa kahle kusukela iphuzu Ngenxa ubudlelwano emndenini ovamile futhi it uyagijima umphumela kuphela - ukudabula.
Eyesibili inzuzo - ukulondoloza imali. Njengoba kungase kuzwakale Corny, kodwa namuhla imali ifeza indima omkhulu kuzo zonke izici zokuphila futhi umndeni iyathinteka. Ngempela, bendabuko inqubo umshado kudinga ukusetshenziswa kwezimali kahle esikhulu, usayizi okuyinto evame uhlupho olukhulu kuhulumeni ngoba engena emshadweni zabantu, ikakhulukazi abasebasha. Ngaphezu kwalokho asikho isidingo ukuchitha imali a wedding, abantu abahlala cohabiting ubudlelwano, uvame ukubizwa ngokuthi zako-aspect indaba ka ithuba "ukukopela" esimweni. Ngokwesibonelo, abesifazane abaningi bathole lezi zinzuzo laba okuhloswe ukuba omama abangashadile, nakuba olukwazi kakhulu futhi amthandayo, nakuba umyeni "unformed".
Zama, ungakwazi ngokuqinisekile uyothola ezinye izici ezinhle yokuntuleka "Isitifiketi somshado", kodwa sizogxila incazelo emfushane yalokho bawo umshado zombango ngokuvamile baba isithiyo lapho kwemukelwa khona isinqumo phezu entry sibe nalobo buhlobo:
- Legal yokungazethembi ubudlelwane futhi izici omkhulu nokuhlalisana;
- Ukungabi khona umqondo ogcwele umthwalo phakathi abalingani ngomunye nomunye futhi izingane ndawonye;
- izici Ethical nezokuziphatha, Ngokuvamile ubonakaliswa isimo sengqondo ngenxa yokuntuleka isiqinisekiso esemthethweni somshado.
- Ukungabi khona ngokugcwele ukuqonda lokho mkhaya izingane ezizalwa abazali abangafuni bebona kudingekile uzobopha elikasofasilahlane.
Yiqiniso, naphezu ngenhla, umuntu ngamunye unquma yena kutsi yini ukwakha impilo yakhe. Into kuphela lokho engifuna ukukusho lena isici ukuthi noma isiphi isinqumo kufanele kube pair ndawonye, ngokucophelela futhi uyaqaphela. Noma ibuphi ubuhlobo kufanele kube ukhululekile ngokombono ezingokwengqondo, futhi ukwenza kanjalo bayakwazi ukusiza kodwa uthando nokuqonda, futhi nokuba khona esasinedumela elibi, "lidayizi" e passport ingadlali indima enkulu kangaka kakhulu. Abantu kuphela abangakwazi ngempela futhi bathande abathandekayo babo bayakwazi postorit umkhaya oqinile, kungakhathaliseki ukuthi isikhathi it is hhayi ngokuthi.
Ezinye izicabucabu ezinesihlungu
Ubuso besenzo akusikho okunzima ukuyiqonda